आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस : के हो अल्जाइमर्स ? कसरी जोगिने ? – Satyapati
आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस : के हो अल्जाइमर्स ? कसरी जोगिने ?
काठमाडौं । आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस ‘विस्मृतिलाई चिनौँ, अल्जाइमर्सलाई जानौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
यस्तै समयमै उच्च रक्तचापको उपचार, शरीरको तौल नियन्त्रण, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नु यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । खानपिनमा विशेष ध्यान दिने । पोषण तत्त्वहरूको कमी हुन नदिनु यो रोगबाट बच्ने उपाय हुन् ।
नेपालमा ६४ लाख ६९ हजारले लगाए ‘कोरोनाविरुद्धको खोप’
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै र्‍यापिड टेस्टमाथि शंका
पहिलो चरणको निर्वाचनको सबै तयारी पूरा
आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप लगाइने, कुन जिल्लामा कुन उमेर समूह ?
कोरोनाको भुङ्ग्रोमा ‘भोकभोकै प्रहरी’